ပဒဲ​ကောက စပါးလင်​နဲ့တူ​ပေမယ့်​ အရသာမတူ ပဒဲ​ကောကအပူအရသာပါ် အစပ်​မဟုတ်​ပါ
အာပူ လျာပူထဲထည့်​သည်​ အပူအရသာမှာပဒဲ​ကောအရသာပင် ​
ွှThu Rah says:
နာမည်ကြီး တုံယမ်းကွမ်း(သို့) တုံယမ်းသလေး(ပုဇွန်+ပြည်ကြီးငါး+ပင်လယ်စာ) လုပ်တာလေး ပြောပြပါလားဗျာ။အထက်ပါနည်းနဲ့ ခပ်စင်စင် တူမယ်ထင်တယ်၊ နို့စိမ်း လည်းထဲ့တာတွေ့တယ်ဗျ၊ ထိုင်းမှာတော့ နာမည်ကြီးတယ်နော်။
အချက်အပြုတ် ၀ါသနာအိုးတွေအတွက် တော့ မ၀တ်ရည်ရဲ့ ဆိုဒ်လေးက တန်ဘိုးရှိလိုက်တာဗျာ။
တုံယမ်းအနှစ်၊ အခဲလို့ မေးပြီ supermarket တိုင်းမှာ ၀ယ်လို့ရပါတယ်
Ready Made ၀ယ်လို့ရလား ဘယ်လိုချက်ရတာလဲ
၀တ်ရည်က သိပ်တော်တာပဲ…. ဘယ်လိုလုပ် ဟင်းတွေအများကြီး ချက်တတ်နေတာလဲ.. အရမ်းအားကျတယ် သိလား….
ကျေးဇူးပါ sis yay! 🙂
ကျွန်တော်ကအစ်မရဲ့ website လိပ်စာအခုမှသိရတယ်
ok I will try to post later sis 🙂
ကျွန်တော်က Executive Chef တစ်ယောက်ပါ ။ကျွန်တော် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းကို ၁၉၉၂ ဖေဖ်ါဝါရီ ထဲက လုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ Kitchen လုပ်သက် အနှစ် ၂၀ ကျော် တော့ရှိပြီဆိုပါတော့..ဒီကာလအတွင်းမှာ over sea တွေလဲသွာရောက် လုပ်ကီုင်ခဲ့ပါသေးတယ် ။ ယိုးဒယားမှာဆို ၂၀၀၃ ဧပြီ မှ ၂၀၀၈ ဒီဇင်ဘာလအထိ
၅ နှစ် နဲ့ ၈ လလောက် ဟိုတယ်စားဖိုမှုး လုပ်ခ၊ဲ့ပါသေးတယ်။ ကျွန်တ်ာအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Pattya ကမ်းခြေက Red Snapper ဟိုတယ်ဟာ ယိုးဒယားမှာဆိုရင် Top Ten စာရင်းဝင် ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့် ဟိုတယ်တစ်လုံးပါ ( ဆောရီးနော် ပြောချင်တဲ့ အဓိကအချက်ဆီမရောက်သေးဘူး ) ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ Tom Yum Soup အကြောင်းပါ ။ Tom Yum Soup ကို ယိုးဒယားမှာ အဓိကအားဖြင့် Tom Yum Goong ( ပုဇွန်နဲ့ )။ Tom Yum Kai ( ကြက်သားနဲ့ )။ Tom Yum Talay ( Sea Foods နဲ့ )။Tom yum Pla ( ငါး နဲ့ )။ အဓိကထားချက်ကြပါတယ် ။ ဒီနေရာမှာ နဲနဲ ကွာဟနေတာလေးတွေတွေ့ရလို့ အခုလိုရေးလိုက်တာပါ ။ ယိုးဒယား တုံရမ်းမှာ ( အုန်းနို့ ) လုံးဝ မသုံးပါဘူး Evaporated Milk လို့ခေါ်တဲ့နို့စိမ်းကိုသုံးတာပါ ။ Tom Yum Soup ထဲမှာ ( ဥနီ၊ မျှစ် ၊ ပြောင်းဖူး ၊ ပဲပြား ၊ တိုဟူး ၊ ) အဲ့ဒါတွေမပါ ပါဘူး ။ အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ ( ကောက်ရိုးမှို ၊ ခရမ်းချဉ်သီး ၊ စပါးလင် ၊ ပတဲကော ၊ ငြုပ်သီးစိမ်း ၊ ကြက်သွန်နီ ၊ နံနံပင် ၊ တုံရမ်းအနှစ် ၊ သံပုရာသီး ၊ငံပြာရည် ၊ သကြား ၊ ကြက်သားမှုန့် ၊ Evaporated Milk ၊ နဲ့ ကြက် (သို့) ပုဇွန် ၊ နှစ်သက်ရာ ကို ထည့်ချက်နှိုင်ပါတယ် ။ အုန်းနို့နဲ့ ချက်တဲ့ဟင်းချိုတစ်မျိုး ရှိသေးတယ် ဒီဟင်းချိုကို အများအားဖြင့် ကြက်သားနဲ့ ချက်ကြတာမို့ Tom Kha Kai လို့ခေါ်ပါတယ် ။ Tom Yum မှာတော့ အုန်းနို့ လုံးဝ မသုံးပါဘူး ( ဒါ ကျွန်တော် သိခဲ့တာလေးကို အကြံပြုပေးတာပါ ။ ဝေဖန်တယ်လို့ တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့နော် ) နားလည်လက်ခံနှိင်ပါစေ ။မဝတ်ရည်ကို အစဉ်လေးစားလျှက်ပါဗျာ ။
ခုလို သေချာ ရှင်းပြပြောပြပေးတာပဲ ကျေးဇူးတင်နေပါပြီ။ ၀တ်ရည်က တုံယမ်းဟင်းချိုဆိုရင် အုန်းနို့ပါတယ်ပဲ ထင်နေခဲ့တာ။ ၀တ်ရည်ကလည်း ကျေးဇူးပါနော်.. 🙂
အမ ပဒယ်ကော ကိုဈေးမှာဘယ်လိုပြောဝယ်ရလဲ?
ဟင်းရွက်စုံ ရောင်းတဲ့ အတန်းမှာ ပဒယ်ဂေါလို့ မေးဝယ်ရင် ရပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ
ဟုတ်ကဲ့ လုပ်စားကြည့်နော် ညီမ
မ၀တ်ရည်ရေ ကျေးဇူးပြုပြီးကြေးအိုးချက်နည်းလေးသိချင်ပါတယ်။အခုရှာနေတာမတွေ့ တော့လို့ ပါ။
ဒီလင့်မှာ ကြေးအိုးလုပ်နည်း တင်ထားပါတယ်။ http://www.wutyeefoodhouse.com/?p=4696
အမရေ ဂျပန်တို့ဖူး အသုံးပြုပုံလေးရေးပေးပါအုံး၊ တို့ဖူးကြော်တိုင်း အဆင်မပြေဖြစ်လို့ပါ။
တို့ဟူးကြော်တဲ့အခါ တို့ဟူးမြုပ်အောင် ဆီများများ ထည့်ပေးပြီ ကြော်ပေးပါ…
A ma ka sone ma dar lal nar khan pyi thank pyan pyaw dar myin taw…
Lay sar talama..
Thank you naw..
You r so welcome!! 😀
မဝတ်​ရည်​ ဗနီကာဆိုတာဘာလဲဟင်းမသိလို့ပါ ပီ​တော့တန်​ပူရာက​ရောဘာလဲဟင်း ရှင်းပြ​ပေးပါ​နော်​ ဘယ်​မှာရန်​င်​မလဲဆိုတာကိုပါ​ရေးပြ​ပေးပါ​နော်​ အမြန်​ဆုံးReplyလုပ်​​ပေးပါမဝတ်​ရည်​
ကြက်ခြေထောက် နဲ့ ချက်လို့ရ တာ မသိ ဘူး ။ ကျေးဇူးပါဘဲ အစ်မ ချက်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်
လုပ်စားကြည့် bro.. စားလို့ ကောင်းတယ်..
အုန်းနိူ့ ထည့်​လို့ မရဘူးလား
ထိုင်း အစားအစာ ​လေး​တွေထပ်​တင်​​စေချင်​တယ်​
ထိုင်း ဝက်​​ခြေ​ထောက်​ ​ပေါင်းနည်း​လေး သိချင်​လို့ပါ
Chit Po Po says:
တုံယမ်းဟင်းချို အရမ်းကောင်းတယ် ချက်ကြည့်တာ ကျေးဇူးပါ Sis ရေ